2006 – Year – Alpha Premium
Righteous Ties (2006) (App member only) ##umicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ လူမိုက်တွေရဲ့ဂိုဏ်းအပေါ်ထားတဲ့သစ္စာနဲ့ သူငယ်ချင်းကြားကခင်မင်မှုအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ အက်ရှင်ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဂိုဏ်းအပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ချီဆောင်းဆိုတဲ့လူမိုက်က သူတို့ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ခိုင်းလို့ ထောင်ထဲကိုဝင်သွားပေးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ ထောင်ထဲကထွက်လို့ရအောင် ဂိုဏ်းကမကူညီတဲ့အပြင် သူ့ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ် ချီဆောင်းကိုသတ်ပေးဖို့ ချီဆောင်းနဲ့ရန်ငြိုးရှိတဲ့လူတွေကပြောတဲ့အခါမှာလည်း ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်က သူ့ကို လုပ်ကြံခိုင်းခဲ့ပါသေးတယ် ဒါ့အပြင် သူ့မိဘတွေပါ ဓားထိုးခံခဲ့ရကြောင်း ချီဆောင်းသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ဂိုဏ်း‌ခေါင်းဆောင်နဲ့ သူ့ကိုသတ်ချင်နေတဲ့သူတွေကိုလက်စားချေဖို့အတွက် ထောင်‌ဖောက်ပြေးဖို့ကြံခဲ့ပါတယ် သူ့ကိုလာသတ်ဖို့ကြံနေတဲ့ချီဆောင်းကိုအပြတ်ရှင်းဖို့ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်က ချီဆောင်းရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ် သူငယ်ချင်းနှစ်‌ယောက်ကနေ ရန်ဘက်တွေဖြစ်သွားခဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ချီ‌ဆောင်းကရော ဘယ်လိုထောင်ဖောက်ပြေးကြမလဲ ဘယ်လိုလက်စားချေကြမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ လူမိုက္ေတြရဲ႕ဂိုဏ္းအေပၚထားတဲ့သစၥာနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းၾကားကခင္မင္မႈအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ အက္ရွင္ဒရာမာဇာတ္ကားေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ဂိုဏ္းအေပၚသစၥာရွိတဲ့ခ်ီေဆာင္းဆိုတဲ့လူမိုက္က သူတို႔ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ခိုင္းလို႔ ေထာင္ထဲကို၀င္သြားေပးခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သူ ေထာင္ထဲကထြက္လို႔ရေအာင္ ဂိုဏ္းကမကူညီတဲ့အျပင္ သူ႔ကိုစြန႔္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္ ခ်ီေဆာင္းကိုသတ္ေပးဖို႔ ခ်ီေဆာင္းနဲ႔ရန္ၿငိဳးရွိတဲ့လူေတြကေျပာတဲ့အခါမွာလည္း ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္က သူ႔ကို လုပ္ႀကံခိုင္းခဲ့ပါေသးတယ္ ဒါ့အျပင္ သူ႔မိဘေတြပါ ဓားထိုးခံခဲ့ရေၾကာင္း ခ်ီေဆာင္းသိသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔ကိုစြန႔္ပစ္ခဲ့တဲ့ဂိုဏ္း‌ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ သူ႔ကိုသတ္ခ်င္ေနတဲ့သူေတြကိုလက္စားေခ်ဖို႔အတြက္ ေထာင္‌ေဖာက္ေျပးဖို႔ႀကံခဲ့ပါတယ္ သူ႔ကိုလာသတ္ဖို႔ႀကံေနတဲ့ခ်ီေဆာင္းကိုအျပတ္ရွင္းဖို႔ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္က ခ်ီေဆာင္းရဲ႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကိုတာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္‌ေယာက္ကေန ရန္ဘက္ေတြျဖစ္သြားခဲ့အခါ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲ ခ်ီ‌ေဆာင္းကေရာ ဘယ္လိုေထာင္ေဖာက္ေျပးၾကမလဲ ဘယ္လိုလက္စားေခ်ၾကမလဲဆိုတာ ဇာတ္ကားထဲမွာ ဆက္လက္ၾကည့္႐ူအားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 2GB Format…mp4 Quality : 1080p ...
Noodle Boxer (2006) ##unicode ဒီတစ်ခါ ထိုင်းဟာသကားကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် နာမည်ကြီးဟာသသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Kom Chauncheunနဲ့ Kohter Aramboy တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ခေါက်ဆွဲရောင်းတဲ့ဆမ်နစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက လက်ဝှေ့သမားဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူက ဘယ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်ဖြစ် သူပဲအထိုးခံရတယ် လက်ဝှေ့သမားဖြစ်ချင်တဲ့ဆမ်နစ်ကို သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အားပေးရှာပါတယ် အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေလုပ်ပေးကြတယ် အမျိုးစုံလုပ်ပေမယ့် လက်ဝှေ့ပညာတော့မပါဘူး ဒီလိုဗရုတ်ကျတဲ့သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ကြောင့် ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးရယ်နေရတာပါပဲ နောက်ဆုံး သူတို့အဖွဲ့ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လက်ဝှေ့သမားဟောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာသိလိုက်ရပြီး ဆမ်နစ်ကိုလက်ဝှေ့သမားဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ထိုးတိုင်းရူံးနေတဲ့ဆမ်နစ်တစ်ယောက် ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမှာလဲဆိုတာကို ဇာတ်ကားကိုဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ခါ ထိုင္းဟာသကားေကာင္းေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ နာမည္ႀကီးဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ Kom Chauncheunနဲ႔ Kohter Aramboy တို႔ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ေခါက္ဆြဲေရာင္းတဲ့ဆမ္နစ္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက လက္ေဝွ႔သမားျဖစ္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သူက ဘယ္သူနဲ႔ရန္ျဖစ္ျဖစ္ သူပဲအထိုးခံရတယ္ လက္ေဝွ႔သမားျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆမ္နစ္ကို သူ႔ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ အားေပးရွာပါတယ္ အေဆာင္လက္ဖြဲ႕ေတြလုပ္ေပးၾကတယ္ အမ်ိဳးစုံလုပ္ေပမယ့္ လက္ေဝွ႔ပညာေတာ့မပါဘူး ဒီလိုဗ႐ုတ္က်တဲ့သူငယ္ခ်င္းအဖြဲ႕ေၾကာင့္ ဇာတ္ကားတစ္ခုလုံးရယ္ေနရတာပါပဲ ေနာက္ဆုံး သူတို႔အဖြဲ႕ထဲက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က လက္ေဝွ႔သမားေဟာင္းတစ္ေယာက္ဆိုတာသိလိုက္ရၿပီး ဆမ္နစ္ကိုလက္ေဝွ႔သမားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ထိုးတိုင္း႐ူံးေနတဲ့ဆမ္နစ္တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္လာမွာလဲဆိုတာကို ဇာတ္ကားကိုဆက္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 1080p DVD-rip Genre : Comedy, Romance Subtitle ...
Flyboys (2006) ##unicode Flyboys ဇာတ်ကားမှာတော့ ဂျာမန်တွေ ပြင်သစ်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာ အမေရိကဘက်က စစ်ကိုကူညီတိုက်ပေးဖို့မကြေညာခင် အမေရိကန် ကောင်လေး၅ယောက်က သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ပြင်သစ်လေတပ်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Blaine Rawlingsက ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်နဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကာ ပြင်သစ်လေတပ်ထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပြင်သစ်လေတပ်မှာ လေယာဉ်မောင်းနည်းကိုသင်ယူနေရင်း Lucienneလို့ခေါ်တဲ့ ပြင်သစ်ကောင်မလေး နဲ့ မတော်တဆတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Blaineကလဲ ပြင်သစ်စကားမပြောတတ် Lucienneကလဲ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တာကြောင့် လက်ဟန်ခြေဟန်တွေနဲ့ဘဲ အချင်းချင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားနေရရှာတယ်။ ဂျာမန်တွေရဲ့ လေတပ်အင်အားများလာတဲ့အခါမှာတော့ Blaineတို့လေတပ်ဘက်ကလဲ အထိနာလာခဲ့တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ ပြင်သစ်လေတပ်ထဲကို ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ အမေရိကန်ကောင်လေးတွေ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကို ရြအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမလား။ စစ်ပွဲတွင်းက Blaineနဲ့ Lucienneတို့အချစ်ရေးကရော ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Flyboys ဇာတ္ကားမွာေတာ့ ဂ်ာမန္ေတြ ျပင္သစ္ကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ အေမရိကဘက္က စစ္ကိုကူညီတိုက္ေပးဖို့မေၾကညာခင္ အေမရိကန္ ေကာင္ေလး၅ေယာက္က သူတို့ရဲ့ကိုယ္ပိုင္အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ ျပင္သစ္ေလတပ္ထဲသို့ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ Blaine Rawlingsက ဘဏ္ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္နဲ႔ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ ျပင္သစ္ေလတပ္ထဲကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျပီး ျပင္သစ္ေလတပ္မွာ ေလယာဥ္ေမာင္းနည္းကိုသင္ယူေနရင္း Lucienneလို့ေခၚတဲ့ ျပင္သစ္ေကာင္မေလး နဲ႔ မေတာ္တဆေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ Blaineကလဲ ျပင္သစ္စကားမေျပာတတ္ Lucienneကလဲ အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္တာေၾကာင့္ လက္ဟန္ေျခဟန္ေတြနဲ႔ဘဲ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားေနရရွာတယ္။ ဂ်ာမန္ေတြရဲ့ ေလတပ္အင္အားမ်ားလာတဲ့အခါမွာေတာ့ Blaineတို့ေလတပ္ဘက္ကလဲ အထိနာလာခဲ့တယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးစုံနဲ႔ ျပင္သစ္ေလတပ္ထဲကို ...
IMDB: 6.5/10 41,270 votes
Tazza: The High Rollers (2006) ##unicode မျှော်လင့်ချက်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်ပြီး လောင်းကစားမှာ နစ်မွန်းသွားကြသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း အချီကြီးပွတာမျိုးရှိတာပေါ့။ ဂိုနီကလည်း လောင်းကစားစွဲနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပေါ့။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့အစ်မက ကွာရှင်းခံရပြီး မယားစရိတ်တွေနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူ့အမေနဲ့အစ်မက ဖခင်ရဲ့အုတ်ဂူကို ကန်တော့ဖို့သွားကြတုန်း ဂိုနီကို အိမ်မှာပဲနေပြီး ပိုက်ဆံတွေကို ကြည့်ထားဖို့မှာခဲ့တယ်။ ကြောင်လက်ငါးကြော်အပ်သလိုဖြစ်ပြီး ဂိုနီတစ်ယောက် အဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ဟွာထူဆိုတဲ့ကတ်ကစားနည်းတစ်မျိုးကို သွားကစားပါတော့တယ်။ သူ့ကိုသူများတွေက ပေါင်းကြံမလှိမ့်တစ်ပတ်လုပ်တာခံရပြီး ငွေတွေအကုန်ဆုံးသွားပါလေရော။ လိမ်တဲ့သူကလည်း မြို့ကနေထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ သူ့အစ်မပိုက်ဆံကိုပြန်ရှာပေးနိုင်ဖို့ လူလိမ်ကိုရှာပုံတော်ဖွင့်ရင်း ဟွာထူကစားတဲ့နေရာမှာ ဆရာကျတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံမိပါတော့တယ်။ အဲ့ဆရာဆီမှာ တပည့်ခံရင်း ဂိုနီတစ်ယောက် ဟွာထူကစားတာကျွမ်းကျင်လာပါတော့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ ဒီလောကထဲမှာ ကျင်လည်ရင်း ဂိုနီတစ်ယောက် ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကို ခံစားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရဲ႕သားေကာင္ျဖစ္ၿပီး ေလာင္းကစားမွာ နစ္မြန္းသြားၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း အခ်ီႀကီးပြတာမ်ိဳးရွိတာေပါ့။ ဂိုနီကလည္း ေလာင္းကစားစြဲေနတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ေပါ့။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔အစ္မက ကြာရွင္းခံရၿပီး မယားစရိတ္ေတြနဲ႔ အိမ္ျပန္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ သူ႔အေမနဲ႔အစ္မက ဖခင္ရဲ႕အုတ္ဂူကို ကန္ေတာ့ဖို႔သြားၾကတုန္း ဂိုနီကို အိမ္မွာပဲေနၿပီး ပိုက္ဆံေတြကို ၾကည့္ထားဖို႔မွာခဲ့တယ္။ ေၾကာင္လက္ငါးေၾကာ္အပ္သလိုျဖစ္ၿပီး ဂိုနီတစ္ေယာက္ အဲ့ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ ဟြာထူဆိုတဲ့ကတ္ကစားနည္းတစ္မ်ိဳးကို သြားကစားပါေတာ့တယ္။ သူ႔ကိုသူမ်ားေတြက ...
IMDB: 7.2/10 2,025 votes
Ultraviolet ##unicode Ultraviolet ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာတော့ လူသားတွေက virusတစ်မျိုးကိုစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ အဲ့virusကရောဂါအဖြစ်လူတွေကြားကို ပြန့်နှံသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ရောဂါကူးစက်တဲ့လူတွေကို hemophageလို့ခေါ်ကြတယ်။ လူသားတွေက hemophageတွေကို မျို့းသုဉ်းအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ လက်ကျန်hemophageတွေကို ပပျောက်စေဖို့အတွက် သူတို့ကိုခြေရာခံပြီးသတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ Violetက သူမကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းသိသွားချိန်မှာ သူမကရောဂါပိုးကူးခံနေရကြောင်းလဲသိသွားခဲ့တယ်။ အဲ့နေ့မှာဘဲ သူမယောကျာ်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ သူမကိုစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး သူမကလေးကို အတင်းအကြပ်ဖျက်ချခိုင်းခဲ့တယ်။ သူမစမ်းသပ်ခန်းကလွှတ်မြောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ hemophageအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူ အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့သူမက လူသားတွေတီထွင်ထားတဲ့ hemophageသတ်ဖြတ်တဲ့လက်နက်ကို ခိုးယူပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အမိန့်ရခဲ့တယ်။ Violetက လက်နက်ကိုခိုးယူလာပြီး ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားချိန်မှာတော့ အဲ့လက်နက်က ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေကြောင်းကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။ Violetတစ်ယောက် အဲ့ကလေးကိုကယ်ဆယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိတဲ့အတွက် လူသားတွေရော hemophageတွေကပါသူမနောက်ကိုလိုက်လာကြပါတော့တယ်။ Violetတစ်ယောက် ဒီလိုအခြေအနေကနေ ဘယ်လိုရုန်းထွက်ပြီး အဲ့ကလေးကိုရောဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Ultraviolet ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားမွာေတာ့ လူသားေတြက virusတစ္မ်ိဳးကိုစမ္းသပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ အဲ့virusကေရာဂါအျဖစ္လူေတြၾကားကို ျပန္႔ႏွံသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ေရာဂါကူးစက္တဲ့လူေတြကို hemophageလို႔ေခၚၾကတယ္။ လူသားေတြက hemophageေတြကို မ်ိဳ႕းသုဥ္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ လက္က်န္hemophageေတြကို ပေပ်ာက္ေစဖို႔အတြက္ သူတို႔ကိုေျခရာခံၿပီးသတ္ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ လက္နက္တစ္ခုကိုတီထြင္ခဲ့တယ္။ Violetက သူမကိုယ္ဝန္ရွိမွန္းသိသြားခ်ိန္မွာ သူမကေရာဂါပိုးကူးခံေနရေၾကာင္းလဲသိသြားခဲ့တယ္။ အဲ့ေန႔မွာဘဲ သူမေယာက်ာ္းေသဆုံးခဲ့ရၿပီးေတာ့ သူမကိုစမ္းသပ္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး သူမကေလးကို အတင္းအၾကပ္ဖ်က္ခ်ခိုင္းခဲ့တယ္။ သူမစမ္းသပ္ခန္းကလႊတ္ေျမာက္လာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ hemophageအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔အတူ အလုပ္တြဲလုပ္ခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔သူမက လူသားေတြတီထြင္ထားတဲ့ hemophageသတ္ျဖတ္တဲ့လက္နက္ကို ခိုးယူၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔အမိန္႔ရခဲ့တယ္။ Violetက လက္နက္ကိုခိုးယူလာၿပီး ဖ်က္ဆီးဖို႔ႀကိဳးစားခ်ိန္မွာေတာ့ အဲ့လက္နက္က ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုသိသြားခဲ့ပါတယ္။ Violetတစ္ေယာက္ အဲ့ကေလးကိုကယ္ဆယ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္မိတဲ့အတြက္ ...
IMDB: 4.4/10 78,979 votes
Van Wilder 2: The Rise of Taj (2006) ##unicode Van Wilder 1ကိုကြည့်ပြီးသားသူတွေအတွက် သူ့ရဲ့အဆက်လေးလာပါပြီ။ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း ဆက်ဆက်ကြည့်ဖို့ Recommendပေးပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်က ဗန် ဝိုင်းလ်ဒါ အကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ သူ့ရဲ့အကူလေး တက်ချ် အကြောင်းကိ​ု ရိုက်ကူးပုံ​ေဖာ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က အရှက်ကြီးပြီး လူကြောက်တတ်တဲ့ တက်ချ်ဟာ ဗန်နဲ့ တွေ့တော့မှ လူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်လာပြီး ယုံကြည်မှုရှိလာပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာဆိုရင် သူဟာ သူ့ရဲ့အဖေတက်ခဲ့တဲ့ ကမ်းဖော့ထ် တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားဖို့ သွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ "မြေခွေးနဲ့ အမဲလိုက်ခွေးများ" အမည်ရှိတဲ့ အဆောင်ကို ဖိတ်ခေါ်ခံရသော်လည်းပဲ အဲ့ဒီက အဖွဲ့ဝင်က လိမ်ပြီးတော့ ပုံနှိပ်အမှားလို့ပြောပြီး ဟောင်းနေတဲ့အဆောင်ဆီ ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီနေရာမှာ သူ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက် သူဟာ အဖွဲ့အသစ်ဖွဲ့လိုက်ပြီး သူတို့ရဲ့အဆောင် အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ သူတို့ရဲ့ အဆောင်ဟာ အဆင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာပြီး နောက်ဆုံးမှာ "မြေခွေးနဲ့အမဲလိုက်ခွေးများ" အဆောင်နဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ တက်ချ်တို့အဖွဲ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားမှာ ဟာသဆန်ဆန် ...
IMDB: 4.9/10 22,129 votes
Eight Below ဒီဇာတ်ကားကတော့ ကွယ်လွယ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး Paul Walker ရဲ့ကားတွေထဲက အကောင်းဆုံးကားတစ်ကားပါပဲ ၁၉၃၈ တုန်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ Antarctica ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို အခြေခံပြီး Walt Disney Pictures က အကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့ ပြန်လည်ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအညွှန်း Jerry ကတော့ National Science Foundation နဲ့ချုုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်အရ Antarctica research base မှာ guide လုပ်ပေးနေရသူပါ သူ့မှာ အတူတူနေတဲ့ ခွေးလေး ရှစ်ကောင်ရှိပါတယ် National Science Foundationရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ (Mount Melbourne) ရေခဲတောင်မှာ (meteorite) ကျောက်တွေကို ရှာဖွေဖို့အတွက်ပေါ့ တစ်နေ့ သူတို့တွေ ထိုရေခဲတောင်သို့ သွားရောက်ဖို့အတွက် ရေခဲလွှာပါးတာကြောင့် ယာဉ်တွေနဲ့သွားမရပဲ ခွေးရှစ်ကောင်ကို စွတ်ဖားနဲ့ချိတ်ပြီးသွားကြရပါတယ် သူတို့ကအသွား နှင်းမုန်တိုင်းက ဝင်လာတဲ့နောက်… ဒဏ်ရာတွေရပြီး အရေးပေါ်လေယာဉ်နဲ့ ဆေးရုံကို သွားရမယ့်ကိစကဖြစ်လာတော့ သူရဲ့ခွေးလေးရှစ်ကောင်ကို ရေခဲပြင်ပေါ်မှာပဲ သံကြိုးတွေ ခိုင်အောင်ချည်ပြီး ထားခဲ့ရပါတော့တယ် Jerry က ...
IMDB: 7.3/10 60,186 votes
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan IMDb (7.3) / Rotten Tomatoes (91%) ဘိုရတ်ဆာဒီယက်ဗ်ဟာ ကာဇတ်စတန်နိုင်ငံရဲ့ တီဗွီသတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော် ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အစိုးရက အမေရိကန်ကိုစေလွှတ်ပြီး အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့လေ့လာဖို့ လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဘိုရတ်တစ်ယောက် အမေရိကားကို ယောင်ချာချာရောက်လာပါတော့တယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရမ်းနိမ့်ပါးပြီး ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေ ဒင်းကြမ်းနဲ့နေရာကလာတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေးတိုးတက်လွန်းလှတဲ့ အမေရိကန်မြို့တော်ကြီးမှာ ဘိုရတ်ဟာ တောသားမြို့ရောက် ကမောက်ကမဖြစ်ရပ်တွေ ဆက်တိုက်ကြုံရပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီမှာမှ ဟိုတယ်ခန်းထဲက တီဗွီမှာ လာနေတဲ့ Baywatch အစီအစဉ်ကိုကြည့်မိပြီး ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး ပမ်မလာအင်ဒါဆင်ကိုမှ အစွဲလန်းကြီးစွဲလန်းသွားတဲ့နောက် မင်းသမီးကို လိုက်ရှာပြီး သူ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ခေါ်သွားပြီး ဇနီးမယားအဖြစ်သိမ်းပိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ဘိုရတ်ဟာ စပြီး သူ့ကိုယ်သူနဲ့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို စမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အဖွင့်ကနေ စပြီး တစ်ကားလုံး ပါးစပ်မစေ့အောင်ခွီနေရတဲ့ ဟာသကားစစ်စစ်ပါ။ ပေါတောတောဟာသမျိုးတွေနဲ့ရယ်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ တကယ့်ကိုသဘာဝကျကျရယ်ရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင် rating တွေလဲမြင့် ပရိသတ်ကော ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကပါချီးကျူးကြရုံမက ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းလေးသုံး ဝင်ငွေအများကြီးပြန်ရထားပြီး ခေါင်းဆောင်မင်းသားကိုပါ ဆုတွေ လျာထားစာရင်းတွေ တန်းစီဝင်ပြီး ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Spoiler alert! ပမ်မလာအန်ဒါဆင်ဟာ ...
IMDB: 7.3/10 353,502 votes
IMDB: 4.4/10 18,633 votes
Running Scared (2006) ##unicode ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး Paul Walker ရဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ဒီကားမှာတော့ Paul ဟာ ဂျိုး ဆိုတဲ့ ဂိုဏ်းစတားနေရာက သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ စလာလာခြင်းမှာတော့ ဂျိုးတို့အဖွဲ့က အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ပိုက်ဆံ ရေတွက်နေတဲ့အချိန် မျက်နှာဖုံးစွပ်လူတစ်စုက ဓားပြဝင်တိုက်ပါတယ်။ ဂျိုးတို့အဖွဲ့ကလဲ ပြန်လည် ခုခံရင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာဖုံးစွပ်အဖွဲ့က လူတွေအကုန်သေကုန်ပါတယ်။ အကုန်သေသွားမှ သိလိုက်တာက မျက်နှာဖုံးစွပ်အဖွဲ့က အကျင့်ပျက်ရဲတွေဆိုတာပါပဲ။ ဂျိုးတို့အဖွဲ့ဟာ ရဲတွေကို မထင်မှတ်ပဲ သတ်မိသလိုဖြစ်သွားတော့ ပစ်ခတ်ရာမှာသုံးခဲ့တဲ့သေနတ်ကို သူတို့ခေါင်းဆောင်က ဂျိုးကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုးကသေနတ်ကို အိမ်မှာခေတ္တသိမ်းထားတာကို သားဖြစ်သူရဲ့သူငယ်ချင်းကတွေ့သွားပြီး မကျေနပ်နေတဲ့ သူ့ပထွေးကိုအဲ့ဒီသေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်မိပါတယ် ကောင်လေးက ပစ်ခတ်ဖြစ်ပြိးတော့ အိမ်ကနေထွက်ပြေးသွားလို့ ဂျိုးကကောင်လေးကို လိုက်ရှာရပါတော့တယ် ဂျိုးကကော သက်သေဖျောက်ဖို့အတွက် ကောင်လေးကို ရှာတွေ့သွားမလား ရှာရင်း ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အလှည့်အပြောင်းများနဲ့ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးမို့ ကြည့်ရှုခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး (၁၈+ အခန်းလေးတွေတော့ အနည်းငယ်ပါလို့ မိသားစုနဲ့ အတူကြည့်ဖို့တော့ မသင့်တော်ပါဘူး ##zawgyi ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္တဲ့ မင္းသားႀကီး Paul Walker ရဲ႔ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ခုနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ ဒီကားမွာေတာ့ Paul ဟာ ဂ်ိဳး ...
IMDB: 7.4/10 96,164 votes
The Lake House The Lake House(2006) (ကြည်နူးရိပ်ရဲ့ကားမို့ 1080P5.1CH ပါပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်…) စာလေးတစ်စောင်ကြောင့် အချစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့ဖို့ ဘယ်သူကမျှော်လင့်ခဲ့မှာလဲ?စတင်ခဲ့တဲ့အချစ်တစ်ခုက အချိန်ကာလကွာခြားနေပေမယ့် နောက်ဆုတ်လိုက်ဖို့က ခဲယဥ်းလွန်းလှပါတယ်။ ကိတ်ဆိုတဲ့ဆရာ၀န်မလေးက ရေကန်ဘေးကအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ဟောင်းပါ။ သူ့နောက်မှာပြောင်းလာမယ့် အိမ်ပိုင်ရှင်အသစ်ဆီကိုစာရေးရင်း သူ့စာက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က ရေကန်ဘေးကအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့ အတိတ်ကအဲလက်စ်ဆီကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။ စာတွေအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်မိသွားပေမယ့်ဆက်သွယ်စရာဆိုလို့ စာတိုက်ပုံးလေးပဲရှိတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာ အချစ်ဆိုတာအိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ အတိတ်က အဲလက်စ်နဲ့ အနာဂတ်က ကိတ်…ဘယ်လိုပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားမလဲဆိုတာ စိတ်၀င်တစားနဲ့ကြည့်ရှုရမှာပါ CMပရိသတ်ကြီးအတွက် ယခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ အားလုံးရဲ့အချစ်တော် ကီနူးရိဒ်နဲ့ ဆန်ဒရာဘူးလော့တို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဥ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သီချင်းချိုချိုလေးတွေနဲ့ ကြည်ကြည်နူးနူးခံစားချင်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေအဖို့တော့….
IMDB: 6.8/10 137,329 votes
Arang (2006) IMDb rating6ရရွိထားၿပီး ယခု ျပသျပီးခဲ့တဲ့ Graceful Friend ထဲက မင္းသမီး Song Yoon-Aနဲ႔ မင္းသား Lee Dong Wook တို႔ အဓိက ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ။ စုံေထာက္ မင္ဟာ ေဒါသႀကီးတဲ့ စုံေထာက္မေလး တစ္ေယာက္ပါ အသက္ငယ္ေပမယ့္ အရည္ခ်င္းျပည့္၀တဲ့ စုံေထာက္ျဖစ္ပါတယ္ စုံေထာက္ လီဟြၽန္ဂီကလည္း ေဆးသိပၸံဌာနကေန ​အမႈစုံစမ္းေရးဘက္ကု​ိ ေျပာင္းလာတဲ့သူပါ တစ္ေန႔မွာ ထူးဆန္းတဲ့ လူသတ္မႈေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ လူသတ္လက္နက္လည္းမေတြ႕ရဘူး တရားခံလည္းရွာမရပဲ ၀ိညာၪၱစ္ေကာင္က သတ္သလိုမ်ိဳး ဘာသဲလြန္စမွ မရတဲ့လူသတ္မ​ႈေတြေၾကာင့္ အားလုံးေခါင္းခဲေနရပါတယ္ အဲ့အမႈကို စုံေထာက္ လီနဲ႔ စုံေထာက္မင္တို႔ တူတူဘယ္လိုစုံစမ္းမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္လမ္းေလးမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈၾကပါေနာ္…။
IMDB: 6.0/10 1,260 votes
A Good Year (2006) A Good Year(2006) IMDb….7.0 ကလေးဘဝကတည်းက မိဘတွေ ဆုံးပါးသွားပြီး၊ ဦးလေးဟင်နရီရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ မက်စ်စကင်နာ။ အရွယ်ရောက်တော့ လန်ဒန်မှာ အခြေချပြီး ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆက်အသွယ်ပြတ်တဲ့အထိ အလုပ်အရမ်းလုပ်ရင်း ငွေနောက်အရမ်းလိုက်ရင်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူ ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ကြည့်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တနေ့ ဦးလေးဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို လွှဲပြောင်းရယူဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ မရောက်ဖြစ်တဲ့ ငယ်ဘဝကြင်လည်ရာ‌ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းက မြို့ငယ်က‌လေးကို သွားရောက်ရင်း ငွေပုံကြားထဲမှာနေ့စဉ် ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အသည်းမာသူ မက်စကင်နာရဲ့ဘဝအချိုးအကွေ့တွေ က ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ရှူစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ.. .The Next Three Days,A Beautiful Mind,Gladiator စတဲ့ဇတ်ကားတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီး သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ခမ်းနားတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာအဓိကသရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး Russell Crowe ကို အားလုံးသိကြမှာပါ..ဒီကားကလည်းတကယ့်ကိုကောင်းလွန်းပါတယ်..
IMDB: 7.0/10 86,737 votes
Babel Babel (2006) IMDB – 7.4 Rotten Tomatoes – 69/100 ဘာသာစကားတွေဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်အ‌ခြေအနေ ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ တည်ရှိနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ရံတစ်ခါ အနုပညာမှာဖြစ်ဖြစ် တကယ့်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ် ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ဘာသာစကားတွေတောင် သူ့ထက်ပိုကျယ်ပြောတဲ့ ခံစားချက်တွေကို စီးကူးသယ်‌ဆောင်ဖော်ပြဖို့ရာ မစွမ်းသာတော့ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ညွှန်းဆိုခြင်းမှာ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာထက် ရရှိတဲ့ခံစားမှုက ပိုပဓာနကျပါတယ်။တစ်ခါတလေ ဘာသာစကားက ခံစားမှုကို မသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ ရုပ်ရှင်ကရတဲ့ခံစားမှုကို ဖော်ညွှန်းဖို့ မတတ်‌နိုင်တော့ပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ အကြောင်းအရာသက်သက်ကိုပဲ ညွှန်းဆိုပါမယ်။ ဘာဘယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ စာသမားတွေနဲ့ မစိမ်းလှတဲ့ နာမည်ပါပဲ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲက ရေလွှမ်းမိုးမှုပြီးတော့ နောဧနောက်ပိုင်းလူတွေဟာ မိုးကောင်းကင်ကို မှီနိုင်မယ့် မျှော်စင်ကို ဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီမျှော်စင်ဟာ ဘာဘယ်ပါပဲ။ နာမည်ကျော် ဖရန့်ကာဖ်ကာရဲ့ မြို့တော်ရဲ့တံဆိပ်ထဲက လူတွေဆောက်လို့မပြီးကြတဲ့ မျှော်စင်ကြီးဟာ ဘာဘယ်ပါပဲ။ အဲ့ဒီမျှော်စင်ဟာ နာမည်ကျော် ဘေဘီလုံမှာရှိတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ နာမည်ဖြစ‌်နေရုံကလွဲပြီး အစအဆုံးမှာ လေသံစိုးစဉ်းမျှ မကြားရတဲ့ ဒီဘာဘယ်ဆိုတဲ့ မျှော်စင်ကြီးက ဘာပက်သက်သတုန်းလို့တော့ တွေးမိကြမှာပဲ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာ မြို့တစ်မြို့နဲ့ ဘာဘယ်ဆိုတဲ့ မျှော်စင်ကြီးကို လူတွေ ဆောက်ကြတော့ ဘုရားသခင်က လူတွေ စည်းလုံးမှုပျက်ပြားပြီး မအောင်မြင်အောင် သူတို့လျှာကထွက်တဲ့ ဘာသာစကားတွေကို ကွဲအောင်လုပ်ပြီး နေရာအရပ်ရပ်ကိုပါ ...
IMDB: 7.4/10 283,859 votes
The Guardian (2006) The Guardian(2006) IMDb…7.0 ကယ်ဆယ်ရေး ရေကူးသမားသမိုင်းတစ်လျောက်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ဘန် ရန်ဒဲလ် ဟာ ကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်ကိုအလွန်ခုံမင်ပြီး ရာထူးတိုးမယူဘဲ ပင်လယ်မှာ စွန့်စားရတာကိုပဲ အထူးနှစ်သက်သူတစ်ယောက်ပါ… လှိုင်းတံပိုးကြားမှာ သေမင်းနဲ့လက်တစ်ကမ်းအလိုရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်ကိုကယ်ရတာလည်းမလွယ်လှပါဘူး… ပုံမှန်စိတ်ပျောက်ဆုံးနေတတ်တဲ့အပြင် သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကလည်း မျှော်လင့်မထားတဲ့နည်းမျိုးစုံကြုံတွေ့နိုင်တာကြောင့် ဘန် တို့အဖွဲ့အတွက် အတော်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပါပဲ…သူဟာဒီကယ်ရေးအလုပ်ကို အချိန်ပေးလွန်းလို့ ချစ်ဇနီးနဲ့တောင်ကွာရှင်း၇တဲ့အနေအထားရောက်ခဲ့ပါတယ်.. တစ်နေတော့ ညဘက် သဘေ်ာတစ်စီးဒုက္ခရောက်တာကို အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်… ဒီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခသယ်တစ်ယောက်ကိုမကယ်နိုင်တဲ့အပြင် ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ သူကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေ အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်… ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဘန်အတွက်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်ပါတော့တယ်… ဒီဇာတ်ကားဟာ မင်းသားကြီး Kevin Costner ဉီးဆောင်ထားပြီး Ashton Kutcher နဲ့ အခြားနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် များစွာပါဝင်ထားပါတယ်…ဆုကြီးတစ်ဆုရရှိခဲ့သလို အခြားဆု(၄)ဆုအတွက်လည်းဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့တယ်… အစမှ အဆုံးထိ တော်တော်ကြီးကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါ..ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…
IMDB: 6.9/10 85,812 votes
The Host (2006) Unicode Horror ကားတွေ Action ကားတွေပဲ နေတိုင်းကြည့်နေရလို့ ညီးငွေ့နေတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အကောင်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် 2006 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ The host ဆိုတဲ့ကားလေးကို လူတိုင်းနည်းပါးကြည့်ဖူးကြမှာပါ ဘယ်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်တဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့… ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုကနေ စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် ထူးဆန်းတဲ့ အကောင်ကြီးတစ်ကောင် ဟန်မြစ်ထဲကနေထွက်ပေါ်လာပြီး လူတွေကို ဒုက္ခပေးပါတော့တယ် အဲ့အကောင်ကြီးနဲ့ မြစ်ဆိပ်မှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်နေကြချိန်မှာ ဂန်ဒူးဆိုတဲ့လူနဲ့ သူရဲ့သမီးလေး ယောင်ဆူးတို့ လူကွဲသွားကြပါတော့တယ် ထို သားအဖတွေ ပြန်တွေ့ကြမလားဆိုတာတော့ … ဒါပေမဲ့ အကောင်ကားပေမဲ့ အရမ်း feel လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးမို့ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်နော် (ဘာသာပြန်သူကတော့ Myint Thinzar ပါ) Zawgyi Horror ကား​ေတြ Action ကား​ေတြပဲ ​ေနတိုင္​းၾကည္​့​ေနရလို႔ ညီး​ေငြ႔​ေနတဲ့ပရိတ္​သတ္​ႀကီးအတြက္​ ​အ​ေကာင္​ကား​ေကာင္​း​ေလးတစ္​ကားနဲ႔ မိတ္​ဆက္​​ေပးခ်င္​ပါတယ္​ 2006 ခုႏွစ္​က ထြက္​႐ွိထားတဲ့ The host ဆိုတဲ့ကား​ေလးကို လူတိုင္​းနည္​းပါးၾကည္​့ဖူးၾကမွာပါ ဘယ္​​ေတာ့ျပန္​ၾကည္​့ၾကည္​့ မ႐ိုးႏိုင္​တဲ့ ကား​ေကာင္​း​ေလးတစ္​ကားပါ ဇာတ္​လမ္​း​ေလးက​ေတာ့… ဓာတု​ေဗဒဓာတ္​ခြဲခန္​းတစ္​ခုက​ေန စြန္​႔ပစ္​လိုက္​တဲ့ စြန္​႔ပစ္​ပစၥည္​း​ေတြ​ေၾကာင္​့ ထူးဆန္​းတဲ့ အ​ေကာင္​ႀကီးတစ္​​ေကာင္​ ...
IMDB: 8.4/10 4,070 votes
Nacho Libre Unicode ဟာသကားကောင်းကောင်းကြည့်ချင်သူတွေ ဒီကားကိုကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Jumanji ထဲကစဟာသ မင်းသား Jack Black ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနေနဲ့ နာချိုဆိုတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ ဖတ်တီးလေးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက နပန်းအားကစားကိုဝါသနာပါတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖေက ဘုန်းတော်ကြီး အမေက သီလရှင်ကနေ မွေးလာတဲ့အတွက် မွေးကတည်းက ခရစ်ယာန်ကျောင်းမှာပဲ အချိန်ကုန်နေပီး ဘာသာရေးအရ နပန်းသတ်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားလို့ ဝါသနာကိုလက်လျော့ထားရတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ထမင်းချက်နဲ့တောက်တိုမယ်ရလုပ်ပီး ကြီးပျင်းလာတဲ့ နာချိုတစ်ယောက် လမ်းဘေးက ကလေက၀တစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းမိပီး အပျော်တမ်း နပန်းသတ်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ရာကနေ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဟာသလေးတွေနဲ့တွဲပီးကြည့်ရမှာပါ။ imdb 5.7 အထိရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပီး ခွီချင်ရင်အခုပဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ Zawgyi ဟာသကားေကာင္းေကာင္းၾကည့္ခ်င္သူေတြ ဒီကားကိုၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ Jumanji ထဲကစဟာသ မင္းသား Jack Black ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းအေနနဲ႔ နာခ်ိဳဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဖတ္တီးေလးဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ...
IMDB: 5.7/10 79,548 votes
IMDB: 6.0/10 107,576 votes